Train Travel Tips Archives | စာမျက်နှာ2၏ 14 | တစ်ဦးကရထား Save
ကမ္ဘာတစ်လွှား, Tipping အလွန်ကွဲပြားခြားနားသောသက်ရောက်မှုများနှင့်အလေ့အကျင့်ရှိပါတယ်, ဥပမာ: တောင်အာဖရိကမှာ Tipping လုပ်ဖို့လိုတယ်, က USA တွင်ဖြစ်သကဲ့သို့. သငျသညျအကြားတစ် ဦး အစွန်အဖျားထားခဲ့ဖို့မျှော်လင့်ရသည် 15 နှင့် 25% အမေရိကမှာ, သင်မကျင့်လျှင်သင်အလွန်ဖြစ်နိုင်သည်…
အားဖြင့် ရေဗက္ကာ Siggers
ခရီးသွားခြင်းသည်သင်ဝယ်ယူရန်သို့မဟုတ်ကြွယ်ဝချမ်းသာရန်သင်ဝယ်ယူသောအရာတစ်ခုဖြစ်သည်ဟုမှန်ကန်စွာယုံကြည်သည်! ထို့အပြင်စည်းစိမ်ကြွယ်ဝရန်အတွက်သင်ကြိုးစားအားထုတ်ထားသောငွေများနှင့်ဝေးဝေးနေရန်မလိုအပ်ပါ. နေရောင်နမ်းသည့်အပူပိုင်းဒေသတွင်စွန့်စားထွက်ရန်စီစဉ်နေစဉ်…
ကိုယ်ဝန်ဆောင်ခြင်းသည်သင်၏ဘဝ၏အံ့သြဖွယ်အကောင်းဆုံးအချိန်တစ်ခုဖြစ်သည်. လုပ်တယ်, သို့သော်, အချို့သောကန့်သတ်နှင့်အတူလာ. အထူးသဖြင့်သင်ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေစဉ်ခရီးသွားရန်စီစဉ်ထားပါက. ကလေးတစ်ယောက်အားသယ်ဆောင်ခြင်းနှင့်တည်ဆောက်ခြင်းသည်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကိုသင်ကန့်သတ်ထားသည်, အထူးသဖြင့်လာသောအခါ…
Travel တွင် Covid-19 ရထားခရီးသွားစက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များအကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်
Covid-19. ငါတို့ပြောတတ်တဲ့အရာအားလုံးပဲ, နှင့်ကောင်းမွန်သောအကြောင်းပြချက်များအတွက်. ဒီဗိုင်းရပ်စ်ပိုးဟာကမ္ဘာ့မြိ်ု့များနှင့်လုံးဝကျနော်တို့နေ့စဉ်ဘဝအကြောင်းကိုနှင့်သင်တန်းရထားခရီးသွားစဉ်းစားလမ်းကိုပြောင်းလဲသွားပြီ. ရထားခရီးသွားခြင်းသည်များစွာသောသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်…
ကောလိပ်ကျောင်းသူငယ်ချင်းများ၏ကုမ္ပဏီအတွက်ခရီးသွားသည့်အခါ, တစ်ဦးခရီးစဉ်ရှိသည်နှင့်မယ့်အလိုအလျောက်ဖြစ်မဿုံအဆင်ပြေထိုသို့. အဘယ်သူမျှမမျှော်လင့်ချက်များနှင့်အတူနေရာတစ်နေရာသို့မဟုတ်မည်သည့်ကြိုတင်စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်းအလည်ခရီးအမှန်တကယ်ဝှက်ထားသောဘဏ္ဍာကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တာအကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်ပါသည်. ဒါဟာလုံလောက်အခန်းထဲမှာအရွက်…
အားဖြင့် ဗြ Proud
ဥရောပယဉ်ကျေးမှုသမိုင်းနှင့်ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ရာဗိသုကာတွေရဲ့ array မှနေရာဖြစ်သည်, ဝတ်ပြုကိုးကွယ်သောအရပ်နှင့်တိုက်ကြီးရဲ့ကျယ်ပြန့်စုဆောင်းခြင်းမှတဆင့်ဖမ်းယူဖြစ်ပါတယ်အရှိဆုံးအရာ၏. ဒါကဘာကြောင့်ယနေ့ဖွင့်, ကျွန်တော်တက်ဝိုင်းင့်3ကျနော်တို့အကြွင်းမဲ့အာဏာမဖြစ်မနေ-ရှုမြင်ဖြစ်ခြင်းထည့်သွင်းစဉ်းစားကြောင်း, တချို့၏ဖြတ်ပြီးကမ္ဘာကျော်အဆောက်အဦးများဖုံးအုပ်…
ရထားအားဖြင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းခရီးသွား, ရထား Travel အီတလီ, ရထားခရီးသွားစပိန်, ခရီးသွားလာရေးသိကောင်းစရာများရထား, ရထား Travel တူရကီ, ဥရောပခရီးသွား
7 အတွေ့အကြုံခုနှစ်တွင်ဥရောပရန်အစားအစာအကောင်းဆုံး Tours မှ
သင့်ရဲ့အရသာဘူးသီးယားဖို့စွန့်စားမှုအပေါ် Go နှင့်ဥရောပအကောင်းဆုံးအစားအစာခရီးစဉ်တွင်ပါဝင်ဆောင်ရွက်. သင်တစ်ဦး avid အစားကောင်းကြိုက်သူများဆိုရင်, သင့်ရဲ့အာခေါင်, အဖြစ်ကောင်းစွာသင့်ရဲ့ Instagram ကိုအစာကျွေးခြင်းသင်တွေ့ကြုံခံစားတံ့သောအရာကိုနှင့်အတူဝမ်းမြောက်သောစိတ်နှင့်ခုန်ကြလိမ့်မည်အဖြစ်. ဒါပေါ့, အကောင်းဆုံးနည်းလမ်း…
ရထားခရီးသွားခြင်း, ရထားခရီးသွားAustriaစတြီးယား, ရထားခရီးသွားချက်သမ္မတနိုင်ငံ, ပြင်သစ်ခရီးသွားရထား, ရထားခရီးသွားဂျာမနီ, ရထား Travel အီတလီ, ရထားခရီးသွားစပိန်, ...
7 နညျးလမျးမြားရန် Stay ကျန်းမာရေး Travel နေစဉ်
coronavirus ၏လက်ရှိဖြစ်ပွားဖရိုဖရဲသို့လူတိုင်းရဲ့ခရီးသွားအစီအစဉ်များကိုပစ်မှုနှင့်အတူ, သငျသညျ coronavirus ကာလအတွင်းသို့မဟုတ်မသင့်ရဲ့အားလပ်ရက်ကိုစောင့်ရမည်ဆိုပါကကသိရန်ခက်ခဲနိုင်ပါတယ်. သင်ကရဲ့အရေးကြီးသောအပေါ်ဆက်လက်ရန်ရွေးချယ်ကြပါလျှင်ငါတို့သည်သင်တို့အဘို့အကြောင်းဆုံးဖြတ်ချက်ချမနိုင်ပေမယ့်…
၎င်း၏အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်စစ် Self-အလိုလိုကျလှနျးခွငျးနှင့်အလိုအလျောက်မှာတစ်ကိုယ်တော်ခရီးသွား. ဒါဟာလာနှငျ့သငျအဖြစ်သွားကြဖို့လွတ်လပ်ခွင့်ကျေးဇူးပြုပြီးင်, ချထားသော, စိတ်ကူးကြာကြာတစ်နေရာတည်းတွင်နေထိုင်နှင့်ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်က်ဘ်ဆိုက်များကိုကျော်သွား; သငျသညျနှောင့်အယှက်မပေးနိုငျခဲ့ပါလျှင်. သငျသညျလုပ်ဖို့လိုအပ်တစ်ခုတည်းသောလိုက်လျော…
သင်တို့ရှိသမျှသည်သိသည့်အတိုင်း, ဗင်းနစ်ဥရောပသားအပေါင်းတို့အတွက်အများဆုံးထူးခြားကြည်နူးဖွယ်မြို့ဖြစ်၏, လျှင်မကမ္ဘာတွင်. အီတလီတူးမြောင်းနှင့်အသေးစားကျမ်းပိုဒ်ထဲကလုံးဝဖန်ဆင်း, အားလုံးကျွန်းတစ်ကျွန်းအပေါ်ထားတဲ့မုသား၏. This has turned the town into one of…